Zvinokonzera feline alopecia | Noti Katsi
Maria Jose Roldan | | Zvirwere
Tinoda katsi yedu zvakanyanya uye tinoda kuti ave noutano nguva dzose, asi dzimwe nguva matambudziko anomuka anenge asingazvizive, uye ndipo patinonyatsotarisira hutano hwake. Chimwe chezvishamiso izvi zvakaipa ndeye feline alopecia, ndiko kuti, kurasikirwa kwebvudzi kwakanyanyisa uko kunogona kukonzera mhanza mune dzimwe nzvimbo dzemuviri wako.
Kurasikirwa kwebvudzi mune feline kunogona kuve nezvikonzero zvakasiyana zvakasiyana sehutachiona hweganda (mhombwe, zvipembenene) kana zvimwe zvikonzero. Zvakajairika kuti katsi dzimwe nguva inokonzeresa kurasikirwa nebvudzi iri nekuzvichenesa zvakanyanya nekuti inonzwa kunhuwa nekuda kweanorwara kana nekuti ine zvipembenene mujasi rayo.
1.3 Chirwere cheCushing
1.5 Nhata inoruma
1.6 Zvinetso zvehutachiona
Pane dzimwe nguva izvo kitsi dzine marwadzo mumajoini adzo dzinogona zvakare kuve nenhengo dzisina mvere dzemuviri wavo nekuibvarura achiedza kudzikamisa chirwere chake. Katsi dzakamanikidzwa dzinogona zvakare kuwana alopecia nekuti vanozvishongedza zvakanyanya uye zvakawandisa nguva. Ichi chiratidzo chekushushikana uye kana iwe uchifunga kuti katsi yako inayo, unofanirwa kutsvaga kudzikama zvakare mumba mako.
Kune rimwe divi, kana kati yakarongedzwa zvakawandisa, inogona kuikonzera kurutsa mabvudzi emvere kupfuura zvainofanirwa, uye kunyangwe iine kugaya kwakanyanya nekumedza bvudzi rakawandisa mukushambidzika kwayo.
Uyewo, kune zvakare matambudziko ehomoniKunyangwe ivo vasingawanzoitika, vanogona zvakare kukonzera kurasikirwa kwebvudzi mumakati, kunyangwe kana vasinga rukure uye vasingakweve iro bvudzi.
Izvo zvinodikanwa kuti uzive kuti kune zvimwe zvikonzero zve feline alopecia, senge mhombwe, iyo inogona kutapurirwa kuvanhu uye nekudaro, zvichave zvakakodzera kurapa nekukurumidza sezvazvinogona.
Sezvauri kuona, pane zvikonzero zvinoverengeka zvinogona kuzvikonzera, saka tiri kuzozviona zvakasiyana kuti tizive maitiro ekuita. Chete nenzira iyi, unogona kuita nekukurumidza kana iwe uchifunga kuti katsi yako inogona kunge iine alopecia chero chikonzero chinoda rubatsiro rwekurapa nekukurumidza sezvazvinogona.
Usapotsa Ndezvipi zvikonzero zvakajairika uye nekudaro iwe uchazoziva maitiro ekuita kana paine chimwe chinhu chambotaurwa apa chiri kuitika kukati yako.
Tunhu tudiki utwu tunoruma kati kukonzera kuwanda kukuru. Kubva pakukwaya kwakawanda, unogona kupedzisira uine nzvimbo dzisina bvudzi. Iwe unofanirwa kuchengeta mhuka ichidzorwa zvakanyanya, nekuti uturu hunogona kukonzera mheziUye kune imwe mhando, nzeve mange, iyo inopararira zvakanyanya kubva kukati kuenda kukati uye kubva kukati kuenda kumunhu.
Kurapa kunosanganisira pfeka antiparasitics iyo inobvisa mite, uye kana iwe ukava nemagamba, ipa mushonga wemhuka mukati saka unogona kudzima.
Nehurombo, iyo katsi inogona zvakare kuve nerumwe rudzi rwezvirwere, ndiyo iyo inokonzeresa alopecia iyo chikafu and the zvakatipoteredza. Iwo ekutanga ari kukonzerwa nekudyiwa kwechimwe chikafu chavasingakwanise kugaya zvakanaka, zvakaita sezviyo zvinowanzo kuve nezvakawanda zvekudya, uye zvinokonzeresa kutsvuka kweganda munzvimbo diki, asi iyo inogona kupararira kune iyo yese muviri.
Inhaling allergener mune zvakatipoteredza, senge mukume kana guruva mite, inogona zvakare kukonzera alopecia.
Mushonga unenge uine chengetedza kati kure neicho allergen izvo zvinoita kuti itching uye kusagadzikana.
Iyo glandular kusagadzikana kunozivikanwa nekugadzirwa kwesteroid mahormone neadrenal gland. Chimwe chezviratidzo zvakajairika ndechekuti kurasikirwa bvudzi nenzira yakaenzana.
Nehurombo, hapasati paine chaiwo marapirwo echirwere ichi. Mishonga inowanzo sanganiswa neshanduko mukudya.
Katsi imhuka zvine musoro zvikuru, kusvika padanho rekuti kushungurudzika, kufinhwa kana shanduko dzinoitika mumba dzinogona kukonzeresa bvudzi. Kuti udzivise izvi, mhuka inofanirwa kudzikama, Ida icho chakakodzera uye shandisa zvigadzirwa senge feliway kana uchizopfuura nemamiriro ekumanikidza (sekuenda kuna chiremba, semuenzaniso).
Ndiyo yakajairika. Flea inoruma kati, uye inozvikwenya nekuda kwekurumwa kwainokonzera. Kazhinji iri harisi dambudziko rakakomba, asi kana mhuka iine zvakawanda, iwe unogona kupedzisira uine scabs uye zviyero paganda rako.
Kurapa kwayo kuri nyore. Inosanganisira isa antiparasitic -as pipette, collar, spray- kana kumupa piritsi yakakurudzirwa nachiremba kuti uadzime. Muzviitiko zvakakomba, zvinogona kuve zvakafanira kushambidza katsi neiyo chaiyo shampoo, zvakare inokurudzirwa nehunyanzvi.
Kurasikirwa kwebvudzi mumakati kunogona kuva chiratidzo chekuti gland yegland haisi kushanda nemazvo. Iyo feline inogona kunge iine hyperthyroidism kana hypothyroidism, izvo zviri zvirwere zvinogona kukonzera kubvarura uye alopecia.
Mushonga unenge uine kukupa mahormone kuitira kuti gland idzokere kuzadzisa basa rayo.
Kutanga Kwazvose vet vanofanirwa kuongorora kuti ndezvipi zvikonzero zviri kukonzera alopecia mukatsi yako. Zvichienderana nechakakonzera, kurapwa kwacho kuchasiyana, nekuti kurapa nhata hakuna kufanana nemushonga wemakonye, ​​semuenzaniso.
Kana, semuenzaniso, vet achifungidzira kuti kati yako ine alopecia nekuti anozvikonzera iye nekuda kwedambudziko rehunhu, iwe unofanirwa kufungisisa nezve izvo zvinokonzeresa kushungurudzika angave ari kutambura uye achitsvaga mishonga asap. Edza kuti kati yako inogona kuwana rugare newe mukati memba.
Kana mushure mekufungisisa iwe usati waziva kuti nei katsi yako ichirasikirwa nevhudzi, saka zvakakosha kuti uende kuna chiremba wemhuka uyo ane hunyanzvi mune dermatology.
Kazhinji, alopecia kusanzwisisika inogara ichienderana nechikonzero chinomutsamwisa. Zvichienderana nekuti ichibva kunhata, zvipembenene, kushushikana ... kana rimwe dambudziko. Kugadzirisa izvo zvinokonzeresa nekukurumidza sezvazvinogona kwakakosha.
Asi rangarira kuti kubvunza chiremba wemhuka ane hunyanzvi mune dermatology kwakakosha nekuti ndiye achave anokubatsira zvakanyanya kuti uone zvikonzero zvezviri kuitika kune wako feline. Kana iri kushushikana kana dambudziko repfungwa, futi izano rakanaka kuenda kune nyanzvi yehunhu hwemhuka kuti ukwanise kuziva zviri kuitika uye tanga nenzira dzekugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona.
Sezvataona, feline alopecia inogona kuve chiratidzo chekuti kati haisi kunzwa mushe. Kana iwe uchifungidzira kuti chimwe chinhu chakanganisika neshamwari yako, usazeze kuenda naye kuna chiremba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Zvirwere » Zvinokonzera feline alopecia
Mhoroi, katsi yangu ine alopecia asi ini handina chokwadi chekuti ndeipi chaiyo hutachiona, saka ndinogona kuiverenga nekuda kwehutachiona kana kurwara kuti ndione kana vachigona kundibatsira:
Ane mitezo yake yekumashure ganda rake rakatsvuka rakatsva uye rinonhuwa zvikuru asi zvakanyanya anodhonza vhudzi rake ndokupfuura achinanzva uye achinanzva uye dzimwe nguva ndinomuona akarara akarara uye nekukasira anosvetuka, anomhanya, anotenderera, achizunza makumbo, uye akapararira mudunhu rese. yemakumbo, sekutaura, ndakamhanya uye zviri kupenga kumuona akadai
Ndinokurudzira kuti uende naye kuna chiremba. Zviripachena kuti iri kuva nenguva yakaipa kwazvo.
Muongorori chete ndiye anokwanisa kukuudza zvaainazvo uye marapirwo acho.
Chinyorwa chako hachina kukwana uye chine zvikanganiso zvakakomba. Feline hypothyroidism haipo uye kune rimwe divi, kana iri mhuka yehyperthyroid, haina kupihwa mushonga nemahormone kuitira kuti gland rishande zvakare, nekuti dambudziko nderekuti iri kushanda zvakanyanya. Tsvaga mazano kubva kuna nyanzvi.